Sacuudiga iyo imaaraadku waxay taageerayaan cabdi fataax al-Sisi ‘xaqqa is-difaacida ‘ee dagaalka Liibiya | ToggaHerer
← Taliyaha Ciidanka Milatariga Jamuuriyada Soomaliya Gen. Odawaa, Ayaa Qiray Inay Jiraan Askar Ay Suuragal Tahay Inay Ka Maqan Yihiin Diiwaanka Mushahar Bixinta Ciidanka
Daawo: Alleh ha u naxariistee Maanta Waxaa Oslo Lagu Aasay Lafdhabartii Jaaliyada Somaliyeed ee Norway Marxuum Cabdi Kuuriya taas oo uu Ahaa Xubnaha waqtiga badan galiyey siday Somalida Norway wax u noqon lahayeen. →
Sacuudiga iyo imaaraadku waxay taageerayaan cabdi fataax al-Sisi ‘xaqqa is-difaacida ‘ee dagaalka Liibiya
Published on June 22, 2020 by Magan
Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka waxay taageero diblomaasiyadeed siinayeen Masar Axadii kadib markii madaxweynaha Abdel Fattah El-Sisi uu sheegay in waddankiisu uu leeyahay xuquuq sharci ah oo uu fara gelin ku sameeyo Liibiya. Madaxweynaha dalalkiisa,
Recep Tayip Erdogan, wuxuu u diray xiidamo Libya si ay ugu dagaallamaan magaca Raiisul Wasaare Fayez Al-Sarraj (GNA) ee Tripoli. Ciidamada GNA waxaa caqabad ku ah ciidamada bariga Liibiya (LNA) ee uu hogaaminayo Khalifa Haftar, waxaana taageeraya Ruushka, Masar iyo Imaaraatka.
El-Sisi wuxuu amar ku siiyay ciidamada Masar inay diyaar u yihiin inay fuliyaan hawl kasta, wuxuuna uga digay GNA inaysan ka gudbi doonin safka hore ee ciidamada Haftar. “Haddii dadka qaar u maleeyaan inay ka gudbi karaan safka hore ee Sirte-Jufra, kani waa khad cas anaga annaga,” ayuu yidhi.
“Faragelin kasta oo toos ah oo ka timaadda dowladda Masar waxay hadda heshay sharci sharci ah.“ Hadafkeennu wuxuu ahaan doonaa inaan ilaalino xuduudaheena galbeedka, iyo inaan taageerno dib u soo celinta amniga iyo xasilloonida Liibiya, maadaama ay qayb ka tahay amniga qaranka Masar.
” Amniga wuxuu ahaa qeyb muhiim ka ah amniga Boqortooyada iyo guud ahaan umadda carabta, Riyadh wuxuu garab taagnaa Qaahira xaquuqdeeda ay ku difaacdo xuduudeeda iyo dadka xagjirnimada. Wasaaradda Arimaha Dibadda ee UAE waxay xaqiijisay midnimadeeda iyo taageerada Masar si ay u ilaaliso amniga iyo xasiloonida. Dowlada UAE ayaa sidoo kale ku baaqday xabad joojin deg deg ah Liibiya iyo go, aanka ah in xalka siyaasadeed uu noqdo “wadada kaliya ee la aqbali karo in lagu soo afjaro khilaafka. Magaalada Magaalada Sirte oo ah halka uu ku dhashay kaligii taliyihii Mucamar Qadaafi, waa 1000km xadka Masar, kala bar inta u dhaxaysa Tripoli iyo Benghazi ee xeebta Liibiya. Waxay 450km u jirtaa caasimada, Tripoli, iyo 600km magaalada Benghazi. Waxay u fureysaa jidka loo maro kontaroolada dekedaha ‘Bisha Saliida’ ee bariga Liibiya, oo ay kujirto kaydka saliida ee ugu weyn dalka.Sirte sidoo kale waa qolka hawlgalada ugu weyn ee LNA iyo isku xidhka gobollada bariga iyo galbeedka Libya. Gegada diyaaradaha iyo dekeddeeda ayaa kamid ah iridaha ugu muhiimsan Liibiya.